Tolo-kevitra hampihena ny lozam-pifamoivoizana | Vaovao.org
Tolo-kevitra hampihena ny lozam-pifamoivoizana
Nampidirin'i admin ny Fri, 04/29/2016 - 20:11
Noho ny voina roa sosona izay namoizana ain'olona maromaro tato ho ato dia nanolotra sosokevitra izay tsy voatery hiandrasana ny fitondrana i Hery atsy amin'ny blaoginy ka hatolotra antsika eto.
Sosokevitra iray izay ampiharin'ny olona amin'ny firenena sasany no arosony. Fehezina amin'ny hoe "ny mpandeha" (ny mpanjifa) no tokony ho tompom-pahefana.
Ny mpandeha dia mandoa vola fa tsy entina maimaim-poana. Ary efa vidina lafo mihitsy ny fitaterana amin'izao fotoana izao raha miohatra amin'ny fidiram-bolan'ny tsirairay. Koa tahaka ny varotra rehetra dia izay tsara sy hita ho mahasoa no vidina. Inona no mifandrindra amin'izany resaka tolotra sy tinady izany eo amin'ny fitaterana:
- Anontaniana mialoha ilay mpamily raha handeha mafy izy na tsia, indrindra ho an'ny taxi-brousse mandeha lavitra. Azavaina aminy mihitsy fa raha handeha mafy izy dia aleo hifidy taxi-brousse iray hafa izay vonona hanaja lalàna. Tokony ho azo atao izany satria ifandrotehana ny mpandeha rehefa eo amin'ny Fitobian'ny fiara.
Inoana fa raha samy mandray ny andraikiny ny mpandeha tsirairay dia mety hisy ihany ny aina ho voavonjy. Dia alao hery ary hiara-mitady vahaolana mandra-pahatongan'ny fitondrana saina.